Sheekha Kooxda la baxaday isbahaysiga musharaxiinta Kulmiye Aadan Siiro oo xukuumada iyo hogaanka Kulmiye ku tilmaamay koox kooban oo qandaraas ka soo qaatay shaydaan | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Sheekh Aadan Siiro oo ahaa sheekhyada aadka looga danbaynjiray guud ahaan Somaliland ayaa imika u xuub siibtay siyaasi reernimo ku taageeray musharax Maxamed Biixi Yoonis isagoon laba gaban oo shaashadaha la iska arkana ka dhex muuqday isagoo xafladii soo dhoweynta musharaxa ka hadlaya oo weliba xidhan koofiyad uu ku sawirnyahay Musharax Maxamed Biixi.
Aadan Siiro ayaa ka soo gudbay xayndaabkii sheekhnimada una xuubsiibtay siyaasi aan weliba meel fog wax ka eegaynin ee nin ay isku beel hoosayahiin si indho la,aan ah ku taageeray. Aadan Siiro oo isticmaalaya magacii iyo karaamadii uu umada ku dhexlahaan jiray ayaa bishii hore kaxaystay koox ay isku ardaayahiin oo kulan ugu tegay Madaxweyne Siilaanyo isagoo qorshahiisu ahaa inuu madaxweynaha ku qanciyo inay beel ahaan taageersanyahiin Musharaxiisa Maxamed Biixi sidaasna uu madaxweynahu kula taageero, hase yeeshe kulankaasi sheekha iyo kooxdiisu waxay kala soo noqdeen weji gabax iyo shacabkii uu u sheekha u ahaa oo ka kala dareeray oo hada noqday nin reerkiisa oo qudha u sheekh ah.
Hadaba waxa wax lala yaabo noqotay in Aadan Siiro uu xataa sugi kariwaayey qudbadiisii Jimacaha ee loo yaqaanay shirka Jaraaid ee uu siyaasada dalka kaga hadlijiray . Waxaanu yidhi inta badan arimahan waxaan ka hadli jiray jimacaha laakiin duruufta ayaa keentay inaan laba kelmadood oo kookooban ka idhaahdo, inkastoo uu ku dheeraaday labadii kelmadood. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu ka hadlay waxa ka mid ahaa inuu yidhi.
Waxaan qabaa anigu in koox kooban oo aan is leeyahay qandaraas ayey ka sitaan Shaydaan ama qaar Somaliland neceb ama qandaraas ayey ka sitaan cid aan wanaaga ogoleyn oo weliba awooda dalka maanta wax ka haysa. Waxaanu yidhi koox ayaa doonaysa in Kulmiye ay qabsato si aan sharaci ahayn, oo sharciyadii laga tago oo xeer jajab lagu wado, waxaanu yidhi waxaan doonaynaa in lagu kala baxo dastuurka u yaal manta, dastuurku ma waxa uu leeyahay qof ha loo xidho. Waxaanu yidhi taageerimayono in dalkan casabadi qabsato oo sidey doonto ka yeesho, afweyne ayaan ka diidnay.
Hadaba waxa isweydiin leh cilmigii iyo diintan uu adeegsanayo sheekhu muxuu uga been sheegayaa ee uu indho la,aanta iyo reernimada uu ugu taageerayaa raga ka soo horjeeda in sharciga lagu dhaqmo oo u eedeynayaa ragga leh aan ku dhaqano sharciga. Aadan Siiro hadii aanu isdiidsiinaynin wuu arkayaa in Kooxdan la baxday isbahaysiga musharaxiintu markii ay ogaadeen in golaha dhexe cod buuran aanay ka helaynin ee 90% ay taageersanyahiin Muj Muuse Biixi ayey bilaabeen inay ka warwareegaan in shirku qabsoomo si aanay ugu dhex fashilmin in badana codsadeen iskuna deyeen in shirka dib loo dhigo, xataa waxay gaadheen heer golahii dhex oo ay musharaxiintani gacantooda laba sano ka hor ku soo xuleenay yiraahdaan maaha xubnahii saxda ahaa maadama aanay na taageeraynin oo ay dhinac u bateen. Waana la wada ogsoonyahay sababta ay isku casileen inay tahay iyagoo ka fakirayey in xukuumada iyo dalka ay khalkhal geliyaan si loogu mashquulo dejinta nabadgelyada iyo kala danbaynta oo meesha uu uga baxo shirka golaxa dhexe ee loo balansanyahay 1o ka November. Hase yeeshee way noqonweyday sidii ay rabeen oo isla markiiba rag ka karti badan ayaa loo magacaabay wasaaradahii ay baneeyeen.
Aadan Siiro hadii uu sida uu sheeganayo dalka u danaynayo ha u tago inaadeerkii oo ha ku yiraahdo muranka iska dhaafa oo shirka iyo madasha lagu tartamayo ku soo laabo oo calafkaaga ka qaad. Waxa ku haboon Aadan Siiro inuu haday ka dhab tahay uu taageero dastuurka Kulmiye oo odhanaya si cadaalad ah ayaa loo tartamayaa, markaaa hadii Madaxweynahii iyo hogaankii xisbiguba yidhaahdeen golaha dhexe ayaa lagu dhex tartamayaa laakiin se uu musharaxiisii diidanayahay tartanka muxuu cid kale eeda u saarayaa oo uu xaqdarada u soo horgelayaa isagoo sherkh sheeganaya mise diintii uu intaas soo baranayey waxa kala qiimo badatay inuu xaqa ka leexdo oo uu reer taageero.
Subxaanalaaah ilaahoow sheekha soo hadee oo xaqa tus, oo qabyaalada ka masax.